Mabhuku aBoris Izaguirre, wechidiki akachinjiswa hunyanzvi | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku aBoris Izaguirre
John Ortiz | | Biography, Vanyori, Mabhuku, Novela
Paunenge uchitsvaga padandemutande pa "Boris Izaguirre mabhuku", iwo mareferenzi makuru anoendeswa kunoverengeka Diamond Villa (2007). Nebhuku rino, munyori weVenzuelan akakurumbira aive wekupedzisira pamubairo wePlanet gore rimwe chetero. Muhupenyu hwake hwese semunyori, Izaguirre akagadzira mazita gumi nemaviri ezvinyorwa, pakati pazvo zvinomira pachena Bindu kuchamhembe, yekuve mumwe wevatengesi vakanyanya muna 2014.
Boris aive akapenya uye akasarudzika jaya, kunyangwe aive akaomerwa nehudiki yakaratidzirwa nedyslexia yake uye nekugara achishungurudzwa kwaakaitwa. Vabereki vake vaive rutsigiro rukuru muhupenyu hwake, kunyanya amai vake, vaigara vachimudzivirira. Izvi uye zvimwe zvakaitika kuna Boris Izaguirre zvinoratidzwa mune yake nhoroondo yehupenyu yakaburitswa muna 2018 uye yakanzi Nguva yeMadutu.
1 Nhoroondo yaBoris Izaguirre
2 Nyanzvi kubudirira
3 Mabhuku akaparidzirwa naBoris Izaguirre
3.2 Uye kamwe kamwe yaive zuro (2009)
3.3 Bindu kuchamhembe (2014)
3.4 Nguva yemadutu (2018)
Nhoroondo yaBoris Izaguirre
Musi waSeptember 29, 1965, Boris Rodolfo, mwanakomana wemunyori ane mukurumbira uye mutsoropodzi wefirimu Rodolfo Izaguirre uye nyanzvi yekutamba Belén Lobo, akaberekerwa muguta reCaracas - guta guru reVenezuela. Akakurudzirwa naamai vake, kubva pazera diki kwazvo akazvipira kunyora. Pana 16 akawana mukana wake wekutanga kuburitswa mupepanhau El Nacional - Rimwe remapepanhau akakosha kwazvo munyika-, uye rakamisikidzwa nenyaya yezvemagariro: Frivolity mhuka.
Kubva panguva iyoyo, rake rehunyanzvi basa raive richiwedzera, kutanga munyika yaakabva uye gare gare mumusha wake wechipiri: Spain. MuVenezuela akamira pachena nekutora chikamu kwake mukugadzira zvinyorwa zveterenovelas Yakapanduka ruby y Mukadzi akapfeka pink pamwe chete nemunyori wemitambo José Ignacio Cabrujas.
Kutenda kubudirira kwakawanikwa neaya maviri anoshamisa mu TVE, Izaguirre akasarudza kuenda muna 1992 kuenda kuEuropean continent, kunyanya kuSantiago de Compostela.
Kubva pane ruzivo, Boris Izaguirre akavaka basa raanotarisa terevhizheni senzvimbo yake huru yekudzidzisa. Pane imwe nguva yaigara kuSpain, akasimuka kusvika stardom muna 1999 paakajoinha showa Martian Makoronike, kwaakashanda kwemakore matanhatu akateedzana. Akave zvakare ari muterevhizheni pane akakosha maSpanish terevhizheni chiteshi, senge Telecinco y TVE, uye nedzimwe nyika senge Telemundo y Venevision.
Pazera remakore makumi maviri nematanhatu, akanyora bhuku rake rekutanga: Kubhururuka kwemhou (1991). Mushure mekumira ipapo, akatangazve basa rake semunyori nekuburitsa runyorwa rwake Peturu Bhuruu mu 1998. Kubva ipapo Boris akanyora mamwe mazita gumi, pakati pawo anomira pachena: Diamond Village, Zvikara zviviri pamwe chete y Nguva dzemadutu -Bhuku rake razvino kwazvo rehupenyu hwevanhu. Iri rekupedzisira basa rakapihwa mu2018 nePureta imba yekutsikisa.
Mabhuku akaparidzirwa naBoris Izaguirre
Iri ibhuku rechisere naIzaguirre, iro rakamuunza padhuze nekuwana mubairo Planet muna 2007. Iyo inoverengeka yakaiswa muCaracas muma40, inguva yezvikanganiso zvinokonzerwa nekuparadzwa kweudzvanyiriri hwapfuura, asi zvakadaro nema bonanzas semhedzisiro yekushandiswa kwemafuta. Iyo rangano inoratidzira mhuri kubva kuCaracas yakakwira nzanga, vari kupfuura munguva dzinosiririsa.
Pakutanga, iyo nhoroondo inobata nezve hupenyu hwehanzvadzi mbiri: Irene naAna Elisa, avo - mushure mekufa kwababa vavo - vanodzidziswa nevavakidzani vavo, mhuri yeUzcátegui. Iyi shanduko yakakosha inounza nemakumi ezviuru emamiriro ezvinhu azere neruvengo, kurwadziwa uye kutambura izvo zvinokonzeresa kuti hanzvadzi dziparadzane.
Iyo nyaya inoenderera nekusununguka kwaAna Elisa uye kutsunga kwake kuita chimwe chinhu chinomupa simba, uye neizvi anoisa simba rake pakuvakwa kweimba. Mazhinji achave madrama uye vatambi vanoratidzwa mune ino zano izere nezvakavanzika zvakatenderedza Villa Diamante monument.
Villa Diamante (Vanyori ...
Uye kamwe kamwe yakanga iri zuro (2009)
Izaguirre zvipo inoverengeka yakaiswa muCuba mukupera kwema50, iyo ichiri kutongwa naFulgencio Batista.
Iyo nyaya inoratidza vaviri majaya sevanyori vanonyanya kutaurwa —Óvalo naEfraín--, vari muchipatara kuseri kwe nzira isina tsitsi yedutu rakayambuka chiwi. Sezvo pavanopora, vanosangana uye vanokurukura zvavanoshuvira mune ramangwana. Nekuda kwekusabvunzwa nemhuri dzavo, vanoendeswa kunzvimbo yekuvanda. Munzvimbo imwe chete iyoyo vanosangana naAurora, mukadzi wechidiki anozova chirevo muhupenyu hwavo.
Mushure mechiitiko munzvimbo yekugara yavaigara, vechidiki vanoparadzaniswa uye havanzwi kubva kuAurora zvakare kwenguva refu. Iko ndipo panotangira rwendo muhupenyu hweva protagonists vaviri. Kune rimwe divi: Efraín anoenda kunhepfenyuro, nzvimbo iyo yekutanga radio sipo opera muCuba yakasikwa kugadzirwa; uye pane rimwe racho: Ovalo akatungamira hupenyu hwake nenzira dzezvematongerwo enyika.
Zvakawanda zviitiko zvekuti vatambi vanogara muCobby inodzedzereka, nyika yakatarisana neshanduko inotyisa. Iyo panorama haisi zvachose yakapusa: iyo Castroist "chimurenga" inouya kuzotora simba nezvose yehurumende inotungamirwa naFulgencio Batista, uyo anochengetedza hukama hwakanaka nemaAmerican.
Nzira mbiri dzakasiyana dzakapindirana muHavana iyi yakagwinha, ichiratidza peji rega rega kuti sei kudanana, rudo uye hushamwari zvinotsvaga kuenderera mune ine dutu rezvematongerwo enyika uye magariro mamiriro.
Uye kamwe kamwe yaive zuro ...
Bindu kuchamhembe (2014)
Iyi nhoroondo ndiyo yekupedzisira inopihwa nemunyori, inyaya yakavakirwa pahupenyu hweiye akakurumbira musori weBritain Rosalinda Fox. Muchiitiko chekutanga, rangano iri rakagadzwa mudunhu reKent (England) muzana ramakore rechiXNUMX. Gare gare inofamba ichidarika nemunyika dzinoverengeka dzeEuropean neAsia uko protagonist ichararama hupenyu hwayo hukuru.
Izvo zvese zvinotanga apo vabereki vaRosalinda vanorambana vomuendesa kuSaint Mary Rose boarding chikoro, kwaanoguma achishandisa hudiki hwake. Kamwe pakuyaruka, anokwanisa kusangana zvakare nababa vake, avo vaishanda sevasori. Mukadzi wechidiki, akafadzwa nebasa iri, anofamba nababa vake kuenda kuIndia.
Nechekare ari munyika yeAsia, Rosalinda anotanga kushanda munyika yespionage. Mushure mechinguva, protagonist inodanana nemurume mukuru -Mr. Reginald Fox- ndokumuroora. Nguva pfupi yapfuura, anounza mamwe matambudziko ehutano, ayo aanofanirwa kuiswa muchipatara kudzamara apora. Nekuda kweiyi mamiriro, iye anoparadzanisa nemurume wake.
Mushure mekupora, anotumirwa semumiriri muchivande kuNazi Germany kunodzidza mafambiro aHitler pachake. Mubasa rakazara reusori, anosangana naJuan Luis Beigbeder (aimbove musoja wechiFrancoist), waanodonha naye murudo, mamiriro ezvinhu anoomesa zvese zvaakagadzirira. Iyo inyaya isinganzwisisike izere nemitambo iyo Rosalinda yakabvaruka pakati pebasa rake nerudo.
Bindu kuchamhembe ...
Nguva dzemadutu (2018)
Muna 2018, Boris Izaguirre akafunga kutsikisa basa iri kuti ataure nyaya yake. Iyo nhoroondo inoitika pakati peVenezuela neSpain. Munyori anorondedzera zvakadzama kuti hupenyu hwake hwaive sei, sei semwana akapfuura nemumatambudziko mazhinji nekuda kweiyo dyslexia uye nehunhu hwake.
Vechidiki vaIzaguirre vakapfuura apo iye akatambura kushungurudzwa, zvese pachikoro chake nekunze kwacho. Kushungurudzwa uku kwakauya zvakanyanya kubva kuvakuru, avo vakazvinongedzera nezvikonzero zvekuti aive nevakadzi nekuda kwekukanganisa kwevabereki vake. Mhosva idzi dzakarambwa naamai vake, avo vakamudzivirira uye vakaedza kumuchengetedza mumusha wake, nzvimbo yakaguma yave nzvimbo yekutizira kwaBoris.
Munyori anotaura zvakare nezverudo rwunotsanangurwa nemurume anonzi Gerardo, mwanakomana wemutapi wenhau ane mukurumbira munyika. Iyo nhoroondo yehupenyu inotsanangura makore ekutanga makumi mashanu ehupenyu hwake, idzo dzaive nedutu, dzaifarira, dzaiyevedza uye dzekushanduka kukuru.
Izaguirre anozviratidza sezvaari; inotsanangura hupenyu hwake hwekuchikoro, rudo rwake rwekutanga, uye kunyange chiitiko chakaoma sekubata chibharo. Anorondedzera zvakare nhanho dzake dzekutanga semunyori kudzamara aenda kunyika iyo yakamupa mikana mikuru yehupenyu hwake.
Mamiriro okunze ane dutu ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mabhuku aBoris Izaguirre